यस्तो अचम्मको मन्दिर, जसको भुइँमा सुत्दा महिला ‘गर्भवती’ ! « गोर्खाली खबर डटकम
यस्तो अचम्मको मन्दिर, जसको भुइँमा सुत्दा महिला ‘गर्भवती’ !
२०७७ माघ २७ गते मङ्गलवार प्रकाशित
एजेन्सी । मेडिकल उपाय नलागेपछि प्रायः मानिसहरू सन्तानका लागि मन्दिर जाने गर्छन् । यहाँ हामी यस्तो मन्दिरको बारेमा कुरा गर्दैछौं जहाँ जाँदा सन्तान सुख प्राप्त हुने मान्यता छ ।भारतको हिमाचल प्रदेशको मन्डी जिल्लामा सिमस गाउँ छ । त्यहाँ रहेको सिमसा देवीको मन्दिरको भुइँमा सुत्ने निःसन्तान महिलाले सन्तान पाउने प्रसिद्धि छ ।
त्यसरी सुत्ने महिलालाई देवी माताले आफैं आएर आशीर्वाद दिने मान्यता छ । त्यसैले टाढाटाढाबाट निःसन्तान महिलाहरू यो विशेष भुइँमा सुत्न आउँछन् । सन्तानदात्री देवीको मन्दिर भनेर पनि यसको नाम प्रसिद्ध छ ।
यहाँ सलिन्दरा नवरात्र उत्सव मनाइन्छ जसको अर्थ हुन्छ सपनामा आउने । यस मन्दिरको भुइँमा सुत्दा देवीले सपनामा महिलालाई सन्तानको आशीर्वाद दिन्छिन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
यो पनिपढ़नु होस:ज्योतिष शास्त्रमा पनि कुण्डली अनुसार नै उसको भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने गरिन्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशि हुने युवतीहरु धेरै नै भाग्यशाली हुने गर्छन् । यो राशि हुनेहरुलाई धनी पति मिल्ने र पतिले धेरै माया गर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै कन्या राशि हुने युवती पनि धेरै नै भाग्यशाली हुन्छन् । यो राशिका युवतीले खोजेको जस्तो पति पाउछन् । मकर राशि हुने युवतीपनि भाग्यशाली हुनछन् । यी युवतीहरु आफ्नो मेहनतमा बिश्वास गर्ने खालका हुन्छन् । त्यस्तै, धनु राशी हुने युवतीको पनि बैबाहिक जीवन सुखद् हुन्छ।
कोरोना सन्त्रासबीच नयाँ आशाः ३ भ्याक्सिनले पाए परीक्षण अनुमति
भाकल के हो, के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ जान्न जरुरी छ;